Isbeddelka Fahanka Diinta | Doodwadaag waa Danwadaag.
Isbeddelka Fahanka Diinta
In lagu fakiro isbeddel waa dareen daacad ah oo sheegaya inaadan ku qanacsanayn xaaladda aad ku nooshahay ee lagu baday, si aad u tiraahdo sidaan kuma qanacsani oo waxaan doonayaa si dhaanta, waa inaad isbedeel ku hadaaqdaa kadibna aad ka shaqaysaa sidii isbeddel adiga iyo umaddaba u gaari lahayd.
Haddaba fahanka isbeddelka xagga fakirka, waxaa ugu horreeya isbeddel in lagu sameeyo qaabka aanu diinta u qaadno ama aan u fahmno, oo badanaa ka imaanaysa qaabka annaga aan umad ahaan u noolnahay ama aan u fakirayno. Haddaba maxaa tiirar u ah isbeddelka xagga diinta ee aanu goobayno?. Qodobbadan hoose, waa tusmooyinka tubta aanu ku soconno:
1-In Isbadalka aanu raadinayno ma aha diinta oo la debbelo ee waxaan raadinaynaa fahanka diinta ee daxalaystay isla markaana abuurmay xilligii dibu-dhaca muslimiinta in uu isbeddelo
2-Isebbelka waa inuu ka yimaadaa gudaha iyo turaathka muslimiinta oo lagu qiyaasay kayd qoraallo qaaraya 6 malyan inta la hayo.
2-Dhaleecaynta iyo caddaynta hab-dhaqanka hab-dhqanka liita ee diinta suubban loo tiirinayo in xoogga la saaro.
3-In la yareeyo fowdada diinta iyada oo bulshada la barayo tiirarka muhiim ah oo kooban oo diinta islaamka ah, waydiimaha kalena loo dhaafayo dadka aqonta u leh diinta
4-In lagu abuuro umadda Soomaaliyeed inay fakiraan, caqligana laga shaqaysiiyo si ay uga tallaabi karaan turunturooyinka adoonsiga oo maskax-nigaxa wadaadka raba in dadka rarto, boobo, bililiqaysto
5- in la yareeyo fakirka diinta ee ku dhisan xoogga iyo xantoobsiga, lana kobciyo naxariista iyo naruurada diinta Eebbe waynaayee.
6-Ballaarinta fakirka diinta iyo ka saarista in lagu koobo hal madraso ama hal firqo iyo kobcinta is aqbalaadda kooxaha kala duwan ee muslimiinta ah.
8-Burburinta fakirka diinta loo tiiriyay ee lagu hor istaagayo dowladnimada (nidaamka iyo kala-danbaynta)
9-Sare u qaadista kasmooyinka Islaamka iyo soo faagista kaydka daxalaystay ee qiimaha leh ee ay muslimiinta ka tageen
10-Sare u qaadista wadahadalka muslimiinta dhaxdooda iyo ogolaashaha kala aragti duwnaashaha, sida oo kale aqbalaadda dadka naga diin duwan ee la macaamilkooda.
11-In laga horyimaado gaalaysiinta iyo kala faquuqa umadda muslimka ah guud ahaan iyo Soomaalida gaar ahaan.
12-Kobcinta fakirka diinta ee ka qaybqaadan kara casriyaynta fahanka diinta sida in aad loo akhriyo dhigaalladii muslimiinta xilliyadii xaddaaradda Muslimiintu hogaaminayeen ee Cabbaasiyiinta iyo Andolus. (Xaddaaradda waa inaysan inaga ahaan ku faane ay naga noqotaa dhaqan iyo ku dayasho).
14-Inaan fikirkeena ka dhowro ceebaynta iyo cayda qofka ama kooxda naga aragti duwan, taa oo dhaawacaysa ujeedkii la higsanayay, reerkana ku furaysa goob lama-dagaan ah.
15-In muslimiinta aanan dacwo la gaarsiin sida gaalada ee xiriirka muslimka uu la leeyahay kan kale noqoto naseexo iyo wax isu sheeg. وتواصو بالحق وتواصو بالصبر
Intaasi waa tusma isbeddeldon ee isbeddelka xagga fakirka (fahanka diinta)
Alle buu ujeedku yahay.
Dhaqdhaqaaqa Isebeddeldoonka Soomaaliyeed (DHIS)